Kaabsool cusub oo laga soo qaaday Zara iyadoo lala kaashanayo Kassl | Bezzia
Maria vazquez | 15/09/2021 18:00 | Maxaan xirtaa
Zara waxay dhowaan soo saartay "Kassl Edition", aruurinta kaabsal cusub oo dad badan oo adduunka ah u soo bandhigi doonta soo jeedintii Kassl Editions, oo ah astaan ​​leh uruurinta isku -dhafan ee dharka dibadda iyo walxaha raagaya ee guriga.
Haddii lagu muujiyey koofiyadda roobka ee nayloon ama fadhiga suufka ah, walaaca Kassl ee cimri dherer, tayo, taabasho midabkuna wuxuu ka muuqdaa shay kasta oo ku jira ururinta kaabsalkan. Wadashaqaynta hamiga leh waxay isu keentaa Kassl oo ah bilicsanaanta nadiifta ah, aan la shaacin iyo ka go'naanta Zara ee tayada.
1 Ku saabsan Kassl Editions
2 Qaybaha muhiimka ah ee ururinta kaabsulka
Ku saabsan Kassl Editions
Daabacadaha KASSL waxaa la aasaasay 2018, markii jaakad kalluumeysi oo fudud laakiin deeqsi ah la jaray iyo dabeecad farsamo ayaa ku dhiirrigelisay koox saaxiibbo ah inay abuuraan astaanta dharka leh jinsi la'aan, waarta oo shaqaynaya iyo ballanqaad xagjir ah oo xagga tayada ah. Tan iyo markaas, Daabacadaha KASSL waxay u guureen agabyada iyo alaabta guriga sida aan hadda ku arki karno ururinta Zara.
Qaybaha muhiimka ah ee ururinta kaabsulka
Waa mid ka mid ah kuwa ugu fudud, laakiin sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu cadcad. Waan ka hadalnaa jaakad kocoon oo dhaadheer leh Waxaa lagu sameeyay isku darka nylon iyo taffeta. Midabka buluugga ah ee badda waxay noogu muuqataa doorasho aad u fiican oo lagu dhammaystirayo muuqaalka cayaaraha.
Waxay u muuqataa mid cajiib ah, dhab ahaantii, leh surwaal baaxad leh dhexda laastikada leh. Surwaalka oo lagu heli karo saddex midab iyo in shirkadu ay ku darto tifaftirkaan shaati ka samaysan maqaar nappa iyo / ama dhididka suufka ah.
Iyada oo ay weheliso dharkii hore loo soo sheegay, jaakadda dheer ee burgundy -ka ah ee leh jeebabka balastigga ayaa taagan, the jaakad maqaar gaaban oo nappa ah laba-dhinac iyo marada nooca bustaha ah ee isku-dhafka dhogor-satin leh oo leh faahfaahin midab-isku-dubarid leh oo ku jirta tones badda iyo burgundy ah.
Miyaad jeceshahay soo jeedinta ururinta kaabsoolka cusub ee Zara iyadoo lala kaashanayo Kassl Edtitions?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » fashion » Maxaan xirtaa » Kaabsool cusub oo laga soo qaaday Zara iyadoo lala kaashanayo Kassl
Waa maxay isku xidhka dhaawacyada?